Notebook Vanopa & Fekitori | China Notebook Vagadziri
Yakakwira-mhando nharaunda inoshamwaridzika PU yeganda kabhuku kabhuku
Chitubu bepa remudzidzi notibhuku Sarudza bepa remabhuku ekunyorera evadzidzi: Kutanga, kunaka kwepepa. Kazhinji, bepa rinoshandiswa ndeye beige Daolin bepa. Iko kunaka kwemapepa maviri aya ndeemhando yepamusoro pakati pemapepa akafanana epapepa. Rudzi urwu rwepepa rine kutambanuka kudiki, yunifomu inki yekumwa, kutsetseka kwakanaka, compact uye opaque mameseji, yakasimba mvura kuramba, yakasimba mativi-matatu maitiro, uye mhando yakanaka uye yakaderera mutengo! Yakasarudzika skrini yemudzidzi kabhuku 1.Bepa ndeimwe yemam ...
Yakagadziriswa logo, yakagadziriswa yemukati yemukati propaganda kabhuku
Chitubu chinobvisa notepad yekusimudzira Iyo fomati yebhuku rakajairika haigone kuratidza tsika yechikwata uye haigone kuenzaniswa. Iyo yakapusa yekuparadzira kabhuku kabhuku inogadzirwa nekambani yedu inogona kuve yakashongedzwa zvakagadzirwa zvinoenderana nekambani brand uye kuita yechiratidzo tsika kusimudzira, kuitira kuti timu timu yekupa zvipo ive yakapusa uye yakashongedzwa, uye inosimbisa kuravira kwechikwata. Flannel Propaganda Notepad Notepad yemukati peji kusarudzwa: General kana kushambadza manotsi: yakanaka art pepa / chando ...
Yakasarudzika dehwe ruvara, yakashongedzwa zvishongo zvekunze zvekutakisa ruvara, yakagadzirirwa yakawanda-basa chipo notepad
Iyi yepamusoro-yekupedzisira chipo-mhando katsamba, rekunze girobhu rakanamatidzwa neganda, uye emukati mapeji akagadzirwa e100g akakwira-magumo akaumbika anonyorwa ekunyora mapepa. Rudzi urwu rwepepa rine kushomeka kudiki, yunifomu inki yekumwa, kutsetseka kwakanaka, kusimba kwemavara uye opacity, uye yakasimba mvura kuramba. , Ine simba rakasimba rehutatu-hwesimba, uye yepamusoro-yekupedzisira mvura-yakavakirwa tsime peni ine simbi yemagineti buckle ine yakatarwa pateni pane bhurugwa. Yakagadzirwa yakasarudzika yakaitwa nemaoko echipo bhokisi kurongedza. Ikoko ...
Iri bhuku rekumusoro-soro rebhizimusi rine rakakura-kumagumo chitarisiko uye chakaderera-kiyi chitarisiko pasina kurasikirwa neicho chirevo. Iko goko rekunze rakaputirwa neakasimba ruvara rweganda pamusoro, iro remukati peji rakagadzirwa ne80g rinoumbwa rinonyorwa bepa, uye iko kuvharwa kunoumbwa nesimbi magineti buckle uye dehwe. Kortex yekunze haina kusimba. Riri mukati peji rerudzi urwu rwebepa rine kusimba kudiki, yunifomu inki yekumwa, kutsetseka kwakanaka, kusimba uye opaque mameseji, yakasimba mvura kuramba, uye yakasimba thre ...